Ungayifaka kanjani i-Docker ku-Raspberry pi ngeRaspbian? | Kusuka kuLinux
Ungayifaka kanjani i-Docker ku-Raspberry pi ngeRaspbian?
I-Docker uhlelo lwesitsha ukuthi awudingi izinsizakusebenza eziningi ukusebenzisa iziqukathi, ngakho-ke Kukhanya kakhulu futhi ngenxa yalokho uDocker angaba ngumqokelwa ophelele wokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwewebhu nokuhlolwa kuRaspberry Pi.
Kunjalo, ingenza ezinye izinto njengokusebenzisa iseva yewebhu, iseva elibambayo noma isiphakeli semininingwane nokuningi ku-Docker ku-Raspberry Pi.
Uma ungazi nge-Docker, kufanele wazi ukuthi le iphrojekthi yomthombo ovulekile leyo shintsha ukuthunyelwa kwesicelo ngaphakathi kweziqukathi zesoftware, ukuhlinzeka ngesendlalelo esingeziwe sokukhishwa kokusebenza kokuzenzakalela nokuzenzakalelayo kuzinhlelo eziningi zokusebenza.
Docker isebenzisa izici zokuhlukaniswa kwemithombo ye-Linux kernel, njengamaqoqo kanye nezikhala zamagama (izikhala zamagama) ukuvumela "iziqukathi" ezihlukile ukuthi zisebenze ngaphakathi kwesimo esisodwa se-Linux, ukugwema isisekelo sokuqala nokugcina imishini ebonakalayo.
1 Ukulungiselela i-Raspberry Pi
2 Faka iDocker ku-Raspberry Pi
Ukulungiselela i-Raspberry Pi
Ukufaka i-Docker ku-Raspberry Pi yethu akuyona into yokubhala ekhaya ngayo futhi ukufakwa kwayo kulula. Kulesi sifundo Sizothatha njengesisekelo uhlelo olusemthethweni lwe-Raspberry yethu okuyiRaspbian.
Uma namanje ungenalo lolu hlelo olufakwe kwi-Raspberry yakho, ungahlola i-athikili elandelayo lapho sichaza ukuthi ungayenza kanjani ngendlela elula. Isixhumanisi yilokhu.
Kakade i-Raspbian ifakiwe ku-Raspberry pi yethu, sizobuyekeza amaphakheji kanye ne-Raspbian APT yokugcina inqolobane ngomyalo olandelayo:
Manje, kufanele ubuyekeze wonke amaphakheji wesoftware amasha atholakele evela eRaspbian. Ngalokhu kufanele senze umyalo olandelayo:
Okwamanje, amaphakheji wesoftware adinga ukuvuselelwa.
Manje, kufanele ufake ama-kernel-headers wohlelo lokusebenza. Lokhu kubalulekile, ngoba uma ungafaki izihloko ze-kernel, iDocker ngeke isebenze.
Ukufaka izihloko ze-kernel, konke okumele ukwenze ukusebenzisa umyalo olandelayo ku-terminal:
Ngakho konke okungenhla sekulungile, manje singaqhubeka nokufakwa kwe-Docker ku-Raspberry Pi yethu ethandekayo, ngoba siqiniseke ngokuphelele ukuthi sinawo wonke amaphakheji abuyekeziwe ohlelo.
Faka iDocker ku-Raspberry Pi
Ukufakwa kwe-Docker Sikwenza ngokusebenzisa umyalo olandelayo ku-terminal:
Le nqubo yokulanda nokufaka ingathatha isikhashana, ngakho-ke ngiphakamisa ukuthi uthathe isikhathi sakho.
Ngokufakwa kwe-Docker ohlelweni lwe-Raspberry Pi yethu, manje siqala ngomsebenzi wokuqalisa I-Docker ukuze ukwazi ukuyisebenzisa.
Kulokhu isinyathelo sokuqala ngukuthi engeza umsebenzisi wethu "pi" (Okuzenzakalelayo kweRaspbian) eqenjini ledokodo. Ngakho-ke, uzokwazi ukudala nokuphatha iziqukathi, izithombe, amavolumu, njll. docker ngaphandle kwamalungelo weSudo noma we-superuser.
Uma badala umsebenzisi ohlukile, kufanele bashintshe u- "pi" baye egameni labo lomyalo kumyalo. Ukufaka umsebenzisi we-pi eqenjini le-Docker kufanele nje basebenzise umyalo olandelayo:
Wenze lolu shintsho manje, kuzodingeka ukwenza ukuqala kabusha kohlelo lwethu, ukuze ushintsho olwenziwe lulayishwe ekuqaleni kohlelo futhi kufakwe iqembu lomsebenzisi wethu le-Docker.
Bangakwazi ukuqala kabusha uhlelo lwabo ngokusebenzisa umyalo olandelayo ku-terminal:
Lapho uhlelo seluqale phansi, sibuyela kulo futhi sizovula ukuphela. Kuyo sizokwenza umyalo olandelayo ku qinisekisa ukufakwa kwe-Docker nokuthi isivele isebenza ohlelweni:
Njengoba ukwazi ukubona, iDocker isebenza ngokuphelele ku-Raspberry Pi yakho.
Manje kufanele usebenzise isitsha sakho sokuqala. Ukuze wenze lokhu, ungasesha eyodwa ekhasini le-Docker, elifaka izinhlelo eziningi. Isixhumanisi yilokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ungayifaka kanjani i-Docker ku-Raspberry pi ngeRaspbian?
USam Hartman uyiDPL entsha kaDebian